တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Influenza vaccine)သည် တုပ်ကွေးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တုပ်ကွေးရောဂါကိုဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသောကြောင့် ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားအသစ်များ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်နေရသည်။ အများအားဖြင့် တုပ်ကွေးရောဂါကို အသင့်အတင့်မှ အမြင့်ဆုံးအထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ် ကွဲပြားခြားနားသည်။ အသက်(၆၅)နှစ်နှင့်အထက် လူကြီးများကိုပေးပါက အကျိုးသက်ရောက်မှု နည်းပါးသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် ပျှမ်းမျှအလုပ်ပျက်ကွက်သောနေ့များ နည်းပါးသွားကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကလေးများကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းဖြင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိကလေးများကိုပါ တုပ်ကွေးရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။ 
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်တိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုဌာနမှ တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အသက်(၆)လအထက် လူများအားလုံးကို နှစ်တိုင်းပေးရန်အကြံပြုထားသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများ၊ အသက်(၆)လမှ (၅)နှစ်အတွင်း ကလေးများ၊ ရောဂါရှိသူများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့် ကျန်းမာရေးအခန်းကဏ္ဍတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများသည် ဤကာကွယ်ဆေးထိုးထားသင့်သည်။
တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ချရသောဆေးဖြစ်သည်။ ကလေးများ (၅-၁၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ကိုယ်ပူခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျဉ်ခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ အချို့နှစ်များ၌ လူပေါင်းတစ်သန်းတွင် တစ်ယောက်ခန့် ဂီလန်ဘာရေး ရောဂါလက္ခဏာစု(Guillain-Barre syndrome)ဖြစ်တတ်သည်။ ဥနှင့်ပြင်းထန်စွာ မတည့်သောလူများ၊ ယခင်ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားများနှင့် ပြင်းထန်စွာ ဆေးမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖူးသူများကို မပေးသင့်ပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အသက်မရှိတော့သော ရောဂါပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆေးနှင့် အသက်ရှိသော်လည်း အားပျော့သည့်ရောဂါပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆေး နှစ်မျိုးလုံးအနေဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများကို အသက်မရှိတော့သော ရောဂါပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆေး ပေးသင့်သည်။ ကြွက်သားထဲသို့ ထိုးနှံသည့်ဆေး၊ နှာခေါင်းထဲသို့ ဖြန်းထည့်သည့်ဆေး၊ အရေပြားအလယ်လွှာထဲသို့ ထိုးနှံသည့်ဆေးဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိသည်။
တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းကို (၁၉၃၀)ခုနှစ်ပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ (၁၉၄၅)ခုနှစ်တွင် အများအပြားရရှိနိုင်လာသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ် ဆေးတစ်လုံး၏ လက်ကားဈေးမှာ (၅.၂၅)ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၂၅)ဒေါ်လာအောက်ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ "Vaccines against influenza WHO position paper – November 2012." (Nov 23, 2012). Wkly Epidemiol Rec 87 (46): 461–76. PMID 23210147.
↑ "Effectiveness and harms of seasonal and pandemic influenza vaccines in children, adults and elderly:acritical review and re-analysis of 15 meta-analyses" (July 2012). Hum Vaccin Immunother 8 (7): 851–62. doi:10.4161/hv.19917. PMID 22777099.
↑ "Efficacy and effectiveness of influenza vaccines:asystematic review and meta-analysis." (Jan 2012). The Lancet. Infectious diseases 12 (1): 36–44. doi:10.1016/S1473-3099(11)70295-X. PMID 22032844.
↑ "Vaccines for preventing influenza in the elderly" (Feb 17, 2010). The Cochrane database of systematic reviews (2): CD004876. doi:10.1002/14651858.CD004876.pub3. PMID 20166072.
↑ "Vaccines for preventing influenza in healthy adults." (13 March 2014). The Cochrane database of systematic reviews 3: CD001269. doi:10.1002/14651858.CD001269.pub5. PMID 24623315.
↑ Who Should Get Vaccinated Against Influenza။ U.S. Centers for Disease Control and Prevention (2015-11-04)။ 2015-12-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Compans၊ Richard W. (2009)။ Vaccines for pandemic influenza။ Dordrecht: Springer။ p. 49။ ISBN 9783540921653။
↑ Vaccine Analysis: Strategies, Principles, and Control။ Springer။ 2014။ p. 61။ ISBN 9783662450246။
↑ Vaccine, influenza။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hamilton၊ Richart (2015)။ Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition။ Jones & Bartlett Learning။ p. 314။ ISBN 9781284057560။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=289775" မှ ရယူရန်
၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။